« TÜLOMSAŞ Adeegga Shisheeye
Ogeysiinta Ugaarsiga: Adkeynta Xayndaabka 1 inta udhaxeysa Ulukışla-Yenice Stations »
XARKA XAMARKA LAMP EE LAMP EE KU SAABSAN BADBAADADA FARSAMADA NOLOSHA EE LIISKA KHATARTA AH EE TCDD HAYDARPAŞA PORT
TCDD Soo iibsiga Xaydhka Libaaxyada 73 ee laxiriira Ledhka Laydhka Agabyada Khatarta ah ee Dekadda Haydarpaşa waxaa lagu iibin doonaa hanaan furan oo ku habboon qodobka 4734 ee Sharciga Wax Soo iibsashada Dadweynaha 19. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan hindisada ayaa hoosta lagu bixiyay:
Lambarka Diiwangelinta Dukumiintiga: 2019 / 471907
Lambarka 73 Lambar Led.
b) Meesha la geeyo: Adeegga Farsamada ee Maareynta Maareynta Maareynta Haydarpaşa
c) Taariikhda Bixinta: Waa in lagu keenaa hal faras oo qaansheegad ah.
a) Goobta: TCDD Haydarpaşa Maaraynta Maaraynta Dekada Munaasabadda
Ogeysiiska Qandaraaska: Ka iibso Led fluorescent Lamp 09 / 04 / 2018 Hoggaamiyo dhaadheer Siraaj iibso doonaa ego GUUD Agaasinka Tareenka SYSTEMS WAAXDA Ankaray Business Laydhka Qalabka iyo Gadashada Ankaray Business hoggaamiyo dhaadheer Siraaj tareenada qaadashada 4734 No. waxaa lagu Abaal marin by curdan furan sida ay 19 Qodobka Sharciga iibsiga dowladeed. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan curdan yihiin hoos ku qoran: Lambarka Diiwaangelinta Qandaraaska: 2018 / 127516 1-Maamulka a) Cinwaanka: Police Neighborhood Racecourse Avenue Blok No: 5 06330. YENİMAHALLE / ANKARA b) Telephone iyo fax number: 3125071087 - 3125071330 c) E-Mail Address: ali.altuner@ego.gov.t waa saddex) gundhigga lagu arki karaa cinwaanka internetka (haddii ay khuseyso) ...
Shirkadda LED Lighting Exhibition 2014 22 / 05 / 2014 LED & Shirkadda Nalalka Korontada 2014: 10. 25-28 LED iyo LED Lighting Exhibition ayaa lagu qaban doonaa Sebtembar 2014 iyo Istanbul Expo Center 9. iyo 10. hoolalka. Nooc kasta oo ka mid ah walxaha nuskhadaha / qaybaha LED ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa LED & LED Lighting Fair halkaas oo alaabta nalalka LED Lighting lagu muujiyo si xoogan. Cadaadiska ayaa ah midka kaliya ee gudaha ee qaybta oo dhan noocyada nalalka LED-ga sida alaabooyinka LED-ga loo isticmaalo warshadaha xayaysiinta, nalalka bannaanka, dhismaha iyo warshadaha waxaa lagu soo bandhigaa bandhig sawir leh oo dhan. LEDs, kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee ku saabsan badeecooyinka ka mid ah teknolojiyada dhaqsaha leh ee horumarka adduunka, waxay noqdeen kuwo ka sii danbeeya
Bursa, tareenka xiga 23 muddadaas! 11 / 09 / 2013 Lamp at 23 oo leh trams in Bursa! muddo Daraamka, wareegga ah ee nolol maalmeedka ku Bursa, ayaa beddeli doonaa caadooyinkii iyo doorbidida. Horeyba waa isbeddellada. Marka lagu daro gawaarida la jiido Jidka dhexdiisa, waxaa loo sameeyey habayn jireed. waxaan ku dhawaaqday. Altıparmak Street ee socodka gaadiidka baabuurta, wax soo saarka oo laba laba, caga lagu fulin doono in hal haad ah. Arbacada Street, oo ah xiriir muhiim ah oo u dhaxeeya Kent Square iyo Çekirge, ayaa lagu hagaajin doonaa jihada Çekirge. Dhamaan xuduudaha AK-da iyo xaddidaadda ayaa la isticmaali doonaa. Maanta, aan sharraxaad ka bixinno cusub. Inta lagu jiro xilliga kala guurka ee taraamka, digniinta iyo digniinta ayaa kordhaya. Xitaa nalalka waddooyinka, sidoo kale dhibcood codsiyada cusub, loo wakiishay doonaa. Total ...
Lamp at 23 oo leh trams in Bursa! 11 / 09 / 2013 Lamp at 23 oo leh trams in Bursa! muddo Daraamka, wareegga ah ee nolol maalmeedka ku Bursa, ayaa beddeli doonaa caadooyinkii iyo doorbidida. Horeyba waa isbeddellada. Marka lagu daro gawaarida la jiido Jidka dhexdiisa, waxaa loo sameeyey habayn jireed. waxaan ku dhawaaqday. Altıparmak Street ee socodka gaadiidka baabuurta, wax soo saarka oo laba laba, caga lagu fulin doono in hal haad ah. Arbacada Street, oo ah xiriir muhiim ah oo u dhaxeeya Kent Square iyo Çekirge, ayaa lagu hagaajin doonaa jihada Çekirge. Dhamaan xuduudaha AK-da iyo xaddidaadda ayaa la isticmaali doonaa. Maanta, aan sharraxaad ka bixinno cusub. Inta lagu jiro xilliga kala guurka ee taraamka, digniinta iyo digniinta ayaa kordhaya. Xitaa nalalka waddooyinka, sidoo kale dhibcood codsiyada cusub, loo wakiishay doonaa. Total ...
Soo Dhaweynta Lamp, TCDD Haydarpaşa Agaasinka Maaraynta Dekadda
Oktoobar 22 @ 14: 30 - 15: 30
Ogeysiiska Qandaraaska: Ka iibso Led fluorescent Lamp
Bursa, tareenka xiga 23 muddadaas!
Lamp at 23 oo leh trams in Bursa!